Antoko Maitso hasin’i Madagasikara : « Ilaina ny fifanarahana politika mba tsy ho tonga amin’ny korontana … » | NewsMada
Antoko Maitso hasin’i Madagasikara : « Ilaina ny fifanarahana politika mba tsy ho tonga amin’ny korontana … »
Nivahiny tao amin’ny fandaharana « Ambarao » eo anivon’ny onjampeo Alliance 92 FM, omaly, ny birao nasionalin’ny antoko Maitso hasin’i Madagasikara, Ratafika. Nivoitra tamin’izany ny hevitr’izy ireo momba ny fifidianana sy ny lalàmpanorenana… Ampahany amin’ny resadresaka.
“Mitondra fanitsiana ary mijery ny fomba hanatsarana ny lalàm-pifidianana izahay. Aminay, ilaina ny fifanarahana politika satria vahaolana izany mba tsy ho tonga amin’ny korontana isika. Hapetraka mazava ny fanovana tiana hatao ary ao anatin’ny mangarahara mba hahatonga ny kandidà hanana zo mitovy amin’ny fifidianana”, hoy izy. Noraisiny ohatra ny tsy fanarahan-dalàna efa fahita toy ny fampiasana fitaovam- panjakana nefa tsy nisy ny fepetra noraisina. “Tokony harahi-maso izany na efa eo aza ny lalàna ary hampiharina…”, hoy ihany Ratafika. Nanteriny koa ny tokony hijerena ny fizarana tee shirt sy vola kely omena ny mpifidy satria fitaka bevava atao amin’ny vahoaka ireny. “Izao iaraha-mahita izao ny vokany. Tsy nahavita iray andro ireny vola kely ireny ka tokony hojerena mba hahatongavana amin’ny fifidianana madio sy eken’ny rehetra…”, hoy izy. Momba ny Ceni kosa, nohitsiny fa mandringa noho ny tsy fahitana ny tena mpilalao fototra ao anatin’io rafitra io. “Lesoka ny tsy fananan’ny antoko politika ao anatiny. Tsy mipetraka ny fahaleovantenany. Mbola andrasana amin’ny governemanta amin’ny tetibolam-panjakana ny vola ho azy ireo…”, hoy Ratafika.
Tsy misy kajikajy politika fa ho tombontsoan’ny vahoaka
Nitondran’ny Maitso hasin’i Madagasikara ny heviny koa ny fanitsiana ny lalàmpanorenana. Manaiky izy ireo raha hatao izany saingy nametraka fepetra. “Tsy hijerena ny tombontsoa manokana fa ho an’ny vahoaka sy ny firenena ary tsy misy kajikajy politika na fitiavan-tena. Aoka hatao mangarahara sy tsy tery vay manta na amboletra. Tokony miandalana ary hampahafantarina ny vahoaka ny votoatiny, indrindra fa ny tantsaha satria lesoka izany”, hoy ihany izy.
Ankoatra izany, nambarany fa efa nanana volavolan-kevitra nalefa amin’ny antanan-tohatra izy ireo momba ny fanatsarana ny lisi-pifidianana. Eo koa ny fanentanana ny mpikambana eo anivon’ny antoko hijery akaiky izany. “Ny mpiara-monina eny ifotony koa tokony hanara- maso na ao avokoa ny iray tanàna na tsia. Tokony mifankalala ny mponina ary afaka mifampiresaka momba izany…”, hoy izy.
Nitondrany ny heviny koa ny momba ny tetibolam-panjakana, hodinihin’ny parlemantera ka nilazany fa zary lasa laharam-pahamehana avokoa ny rehetra. “Efa latsaka an-katerena isika… Na izany aza, misy ny laharam-pahamehana ambon’ny laharam-pahamehana. Ohatra ny momba ny fiainan’ny vahoaka. Tokony hojerena izany… Mandeha amin’ny resaka tontolo iainana koa izany raha ho anay maitso… Aoka tsy hodinihana fa ho any fa ho any. Jereo akaiky io tetibola io ry parlemantera. Farito ny laharam- pahemahana…”, hoy izy.
Kandidà tokana amin’ny fifidianana filoham-pirenena
Momba ny fiarahana eo anivon’ny vovonana Armada kosa, nambarany fa mbola voatana ny hanolorana miaraka kandidà tokana na samy manana ny fotokeviny aza izy ireo. “Misy ny vina iraisana itondrana ny firenena. Olon-dehibe nifanaiky sy nifanao velirano ny mpitarika ny Mapar, Hiaraka isika, Malagasy miara-miainga, Maitso hasin’i Madagasikara ary koa ny Avana, ka tsy hisy ny fivadibadihana satria efa mafy fototra izahay amin’izao fahefa taonanay izao…”, hoy izy. Notsiahiviny fa mahay miasa mirindra izy ireo ary hivory ato ho ato hanendry ny ho kandidà iraisana amin ‘ny fifidianana.